इच्छावृत्ति: 06/01/2011 - 07/01/2011
फोटोसपमा खिँचडी पाकेका अनुहारहरू
भाले मुङ्ग्रो जस्तो रङ्ग फेर्न व्यस्त छन्
दैनिक समाचार पत्रको मञ्चमा।
आयमिक एउटा अवधारणाको रेखा कोरिएको हुन्छ
रङ्गीन भरोसाको खोस्टे विज्ञापन
उत्रिएका नीजि व्यवसायीहरू
आदर्शलाई बलात्कार गर्न मात्र पोख्त छन्।
विश्वासको जोबनलाई वैश्या बनाउन मात्र खप्पिस् छन्।
श्री, बाबा, गुरूदेवहरू
रामलीलाको अभिनय गर्नका सट्टा
रोग निवारकको एड्बक्स् बोकेर
जुलुस हिँडिरहेका छन्।
तर मान्छेको बस्तीमा छरिएको एड्सको वीर्य
निगेटिव हुनै सकेको छैन।
शोकको एउटा विज्ञापन
कम्जोर मुटु घचघच्याउन आउँछ
आँसु र वेदनाको सास फेर्दै।
अनि आउँछन् फेरि
फ्वाँ-फ्वाँ सास फेर्दै
तर आउँदैन किन विज्ञापनमा ?
कहिले, मेरो गाउँको मानचित्र !
मेरो शहरको मानचित्र !!
दुःखहरू र्‍याँई र्‍याँई सारङ्गी रेटिरहेको छ।
सपनाहरू टङ्टङ् घाम तापिरहेको छ।
Posted by Dipen Tamang at Monday, June 27, 2011 No comments:
तर फेसको रङ्ग नै देखिँदैन।
नक्कली फेसको रङ्गमा झुम्छन्
तर मनबुकसम्म पस्छन्।
मित्रताको खाँट्टी सिपाही हुँ भन्छन्
युद्ध गर्नै जाँदैनन्
लुकामारी खिलिबस्छन् मनग्गे
भावनाको उत्कट इच्छा
कल्पनाको रङ्गले लिपेर
नलाग्दा, फेरि फ्याँक्छन्
फेबिकलको एक चोइटा टाँसिन्छ मनबुकमा।
परिक्रमामा संसार जितेर आएका फेसहरू
नियास्रो रुपको बादल फटाएर
चकमक भिरेका छन् अङ्ग-अङ्गमा ।
सीता होइन, द्रोपती हुँ
महाभारतको कथा पनि कहाँ सकिएको छ र ?
Posted by Dipen Tamang at Friday, June 24, 2011 No comments:
खाली खुट्टै हिँडेका घोडाको टाप जस्तै
बलबहादरहरूले हिँडेका पैँतालाका छाप
अझै पुछिन सकेको छैन
इतिहासको खल्लो रङ्गले।
घाँटीमा ऐठन पार्ने गरि कस्सिएका
उपनिवेशित चियाको नाके डोरी
अझै छुट्न सकेको छैन
बलबहादुरहरूका घोक्रो छेलेको छालाबाट।
ढुङ्गा फोर्न लाम लागेका बलबहादुरहरूका हातहरू
प्यासी छन् पलपल
सङ्गीत भर्नु वेरङ्ग जीवनको।
ढुङ्गाभन्दा कठोर तालमा बुनिएका
अझै फुट्न सकेको छैन
बलबहादुरहरूका चिसा आँखाबाट।
रङ्ग पोति रक्ताम्मे पारिदिएका
बलबहादुरहरूका फुक्क छातीमाथि
अझै परेड खेल्न छाडेका छैन
एउटा अतृप्त इच्छावृत्तिको युद्धमा
लड्न हिँडेका आमाहरूका कोख
र एउटा बेटुङ्गो सपनाको राँको बाल्न
कम्मर कसेका बाबुहरूका इच्छाशक्ति
अझै झुत्त्रिएको छैन
अझै मुर्झाएको छैन
इच्छाहरू बाँसको खाम्बोमा
सुर्काउनै सकेका छैन झोपडीहरू
फ्यात् फ्यात् कुहिएर लड्दैछन्
तप् तप् चुहिएका विस्मादका आँशु
सिकुवाको डिलमा टुक्सुक्क बसिरहन्छ।
हाँसोको एक पाहुना गीत
सङ्घारको फेदिमा टोलाईरहन्छ।
भारमा लमतन्न तेर्साइएका दाउराहरू
सँधै सँधै वियोगिनीको गीत गाउँछन्।
प्रसन्ताको बिऊ छिपेर कुप्रेका अनुहारहरू
सँधै सँधै झरी गीत गाउँछन्।
कति मोहक देखिने निलो आकाश
कति शीतल देखिने चन्द्रमा
त्यसमा कोरिएको झैँ लाग्ने कारङ्किरिङ रेखाहरू -ताराको
मानचित्र कोर्न थाल्छन् प्रत्येक रात